''အခဈြ အိမျထောငျရေးနဲ့ စိတျခံစားခကျြ'' - SANTHITSA
ဒီဘကျခတျေမှာ ယောကျြားမိနျးမ အတျောမြားမြားဟာ အိမျထောငျရေးအပျေါကို ယုံကွညျသကျဝငျမှု နညျးပါးလာပွီး အိမျထောငျမပွုပဲ အခဈြကို အခဈြသကျသကျနဲ့ တညျဆောကျခငျြ လာကွတာကို တှမွေ့ငျလာရပါတယျ။
ဒါကလညျး တဈကယျ့တဈကယျတော့ အပွဈအကွီးကွီးလို့ မဆိုသာပါ။ ဘာကွောငျ့လညျးလို့ဆိုရငျ ခတျေစနဈအရ ယောကျြားမိနျးမတနျးတူ အလုပျလုပျကွရပွီး တနျးတူ ငှကွေေး ရှာဖှနေနေိုငျကွမှု အပျေါမှာ မြားစှာ မူတညျနတေယျလို့ မွငျမိပါတယျ။
ထကျမွကျတဲ့ အမြိုးသမီးတှဟော အမြိုးသားတှရေဲ့ လှမျးမိုးမှုကို မခံခငျြကွသလို မိမိကိုယျကိုယျ ယုံကွညျမှုအပွညျ့ရှိတဲ့ အမြိုးသားမြားကလညျး ဘယျလို သွဇာလှမျးမိုးမှုမြိုးကိုမှ မလိုလားနိုငျကွတော့တာကွောငျ့ပဲလို ထငျပါတယျ။
အခဈြမရှိတော့တာဖွငျ့ မဟုတျကွသလို အခဈြကို မလိုလားတာမြိုး sex ကို စိတျမဝငျစားတာမြိုးလညျး မဟုတျပွနျပါဘူးလို့ သုံးသပျမိပါတယျ။ ခတျေအခွအေနအေရ အိမျထောငျမှုတဈခု ထူထောငျဖို့ရာ အခကျအခဲနဲ့ လိုအပျခကျြမြားစှာဟာ အမြိုးသား အမြိုးသမီး စုံတှဲတို့အတှကျ ဘဝရဲ့ အရေးတကွီး စိနျချေါမှုအပိုငျးတှေ ဖွဈလာတာကို တှမွေ့ငျလာရပါတယျ။
Living together နထေိုငျမှုတှေ ပိုမိုအားကောငျးလာခဲ့ပွီး အတိအလငျး အိမျထောငျမပွုပဲ အတိအလငျးခဈြ အတိအလငျးတှဲတာမြိုး မဟုတျပွနျတော့ပဲ ကိုယျ့နားလညျးမှုနဲ့ကိုယျ Silent တှဲတာမြိုးတှလေညျး မြားစှာ တှမွေ့ငျလာကွရပါတယျ။
ဘယျသို့ပငျ ဆိုစကောမူ ဖိုနှငျ့မ ဆနျ့ကငျြဘကျဟူသညျမှာ သှေးမတျောသားမစပျ သံယောဇဉျမြိုး ဖွဈသညျ့အတှကျ နှဈနှဈကာကာ ခဈြကွဖို့တော့ဖွငျ့ အထူး လိုအပျပါတယျ။ အရှယျရောကျပွီးသူ ဖိုနဲ့မကွားတှငျ ခဈြခွငျးတရားဖွငျ့ sexကို တညျဆောကျနိုငျဖို့သညျ အရေးကွီးသညျ့ အခကျြပငျတညျး။
သို့မဟုတျပါက အလုပျသဘောနှငျ့ စကျရုပျသဘောသာ ဆောငျလြှကျ တဈဦးအပျေါတဈဦး ယုံကွညျထားသညျ့ တညျဆောကျမှု ပကျြပယျြနိုငျကာ လူသားစဈစဈတို့၏ သဘောသဘာဝမြား ပြောကျဆုံးသှားနိုငျပါသညျ။
အိမျထောငျသညျမြား ဒါမှမဟုတျ စုံတှဲမြားအနနေဲ့ တဈဦးအပျေါတဈဦး နားလညျခွငျးမြားဖွငျ့လကျတှဲကွပွီး ဖေးမ စာနာစိတျမြားဖွငျ့ မပွောငျးမလဲသောစိတျ တဈသဘောတညျးထားရှိကာ ခဈြကွမညျဆိုလြှငျ သကျဆုံးတိုငျ တှဲလကျမြား ခိုငျမွဲနိုငျမညျသာ ဖွဈပါတယျ။
Sex ကို ဆေးပညာအရ အံအားသငျ့ဖှယျရာ ညှနျးဆိုထားမှုတဈခုမှာ…..
အိမျထောငျသညျမြားကွား အတူခံစား နထေိုငျကွသူမြားကွား မကွာခဏဆိုသလို sex ကိစ်စပွုလုပျခွငျးကွောငျ့ အောကျပါ ကနျြးမာခွငျးရဲ့ အကြိုးကြေးဇူးမြားကို ရရှိနိုငျတယျလို့ ဆိုထားပါတယျ။
၁. စိတျဖိစီးမှုကို လြော့ပါးစပေါတယျ။
၂. သှေးတိုး ကဆြငျးစပေါတယျ။
၃. ကိုယျခံစှမျးအားစနဈကို ပိုမိုကောငျးမှနျ တိုးတကျစပေါတယျ။
၄. ကိုယျလကျလှုပျရှားမှုကို ဖွဈပျေါစပေါတယျ။
၅. ကယျလိုရီ လောငျကြှမျးစပေါတယျ။
၆. နှလုံးသှေးကွောကနျြးမာရေး ကောငျးမှနျစပေါတယျ။
၇. ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ လေးစားစိတျ တိုးစပေါတယျ။
၈. စိတျဓာတျကွံ့ခိုငျ သနျမာစပေါတယျ။
၉. ကိုကျခဲမှု သကျသာစပေါတယျ။
၁၀. အမြိုးသားမြားကို ဆီးကြိတျကငျဆာ ဖွဈပှားမှုလြော့ကစြပေါတယျ။
၁၁. တငျပါးဆုံတဈဝှိုကျ ကွှကျသားတှကေို သနျစှမျးစပေါတယျ။
၁၂. နှဈနှဈခွိုကျခွိုကျ အိပျမောကစြပေါတယျ။
အခဈြကွောငျ့ပဲဖွဈစေ အိမျထောငျရေးကွောငျ့ပဲဖွဈစေ စိတျတူသဘောတူ ဆကျဆံကွဖို့သာ အရေးကွီးပါတယျ ဆိုတဲ့အကွောငျး နှဈဦးနှဈဘကျ ကွညျဖွူတဲ့ ဆကျဆံရေးကို တညျဆောကျရငျး ကနျြးမာသာယာ ကောငျးမှနျတဲ့ သဘာဝတရားကွီးကို ပိုငျဆိုငျရရှိနိုငျကွပါစေ။
”အချစ် အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ စိတ်ခံစားချက်”
ဒီဘက်ခေတ်မှာ ယောက်ျားမိန်းမ အတော်များများဟာ အိမ်ထောင်ရေးအပေါ်ကို ယုံကြည်သက်ဝင်မှု နည်းပါးလာပြီး အိမ်ထောင်မပြုပဲ အချစ်ကို အချစ်သက်သက်နဲ့ တည်ဆောက်ချင် လာကြတာကို တွေ့မြင်လာရပါတယ်။
ဒါကလည်း တစ်ကယ့်တစ်ကယ်တော့ အပြစ်အကြီးကြီးလို့ မဆိုသာပါ။ ဘာကြောင့်လည်းလို့ဆိုရင် ခေတ်စနစ်အရ ယောက်ျားမိန်းမတန်းတူ အလုပ်လုပ်ကြရပြီး တန်းတူ ငွေကြေး ရှာဖွေနေနိုင်ကြမှု အပေါ်မှာ များစွာ မူတည်နေတယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။
ထက်မြက်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတွေရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကို မခံချင်ကြသလို မိမိကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့ အမျိုးသားများကလည်း ဘယ်လို သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမျိုးကိုမှ မလိုလားနိုင်ကြတော့တာကြောင့်ပဲလို ထင်ပါတယ်။
အချစ်မရှိတော့တာဖြင့် မဟုတ်ကြသလို အချစ်ကို မလိုလားတာမျိုး sex ကို စိတ်မဝင်စားတာမျိုးလည်း မဟုတ်ပြန်ပါဘူးလို့ သုံးသပ်မိပါတယ်။ ခေတ်အခြေအနေအရ အိမ်ထောင်မှုတစ်ခု ထူထောင်ဖို့ရာ အခက်အခဲနဲ့ လိုအပ်ချက်များစွာဟာ အမျိုးသား အမျိုးသမီး စုံတွဲတို့အတွက် ဘဝရဲ့ အရေးတကြီး စိန်ခေါ်မှုအပိုင်းတွေ ဖြစ်လာတာကို တွေ့မြင်လာရပါတယ်။
Living together နေထိုင်မှုတွေ ပိုမိုအားကောင်းလာခဲ့ပြီး အတိအလင်း အိမ်ထောင်မပြုပဲ အတိအလင်းချစ် အတိအလင်းတွဲတာမျိုး မဟုတ်ပြန်တော့ပဲ ကိုယ့်နားလည်းမှုနဲ့ကိုယ် Silent တွဲတာမျိုးတွေလည်း များစွာ တွေ့မြင်လာကြရပါတယ်။
ဘယ်သို့ပင် ဆိုစေကာမူ ဖိုနှင့်မ ဆန့်ကျင်ဘက်ဟူသည်မှာ သွေးမတော်သားမစပ် သံယောဇဉ်မျိုး ဖြစ်သည့်အတွက် နှစ်နှစ်ကာကာ ချစ်ကြဖို့တော့ဖြင့် အထူး လိုအပ်ပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ဖိုနဲ့မကြားတွင် ချစ်ခြင်းတရားဖြင့် sexကို တည်ဆောက်နိုင်ဖို့သည် အရေးကြီးသည့် အချက်ပင်တည်း။
သို့မဟုတ်ပါက အလုပ်သဘောနှင့် စက်ရုပ်သဘောသာ ဆောင်လျှက် တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦး ယုံကြည်ထားသည့် တည်ဆောက်မှု ပျက်ပျယ်နိုင်ကာ လူသားစစ်စစ်တို့၏ သဘောသဘာဝများ ပျောက်ဆုံးသွားနိုင်ပါသည်။
အိမ်ထောင်သည်များ ဒါမှမဟုတ် စုံတွဲများအနေနဲ့ တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦး နားလည်ခြင်းများဖြင့်လက်တွဲကြပြီး ဖေးမ စာနာစိတ်များဖြင့် မပြောင်းမလဲသောစိတ် တစ်သဘောတည်းထားရှိကာ ချစ်ကြမည်ဆိုလျှင် သက်ဆုံးတိုင် တွဲလက်များ ခိုင်မြဲနိုင်မည်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
Sex ကို ဆေးပညာအရ အံအားသင့်ဖွယ်ရာ ညွှန်းဆိုထားမှုတစ်ခုမှာ…..
အိမ်ထောင်သည်များကြား အတူခံစား နေထိုင်ကြသူများကြား မကြာခဏဆိုသလို sex ကိစ္စပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် အောက်ပါ ကျန်းမာခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိနိုင်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
၁. စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့ပါးစေပါတယ်။
၂. သွေးတိုး ကျဆင်းစေပါတယ်။
၃. ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကို ပိုမိုကောင်းမွန် တိုးတက်စေပါတယ်။
၄. ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
၅. ကယ်လိုရီ လောင်ကျွမ်းစေပါတယ်။
၆. နှလုံးသွေးကြောကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
၇. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လေးစားစိတ် တိုးစေပါတယ်။
၈. စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင် သန်မာစေပါတယ်။
၉. ကိုက်ခဲမှု သက်သာစေပါတယ်။
၁၀. အမျိုးသားများကို ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ ဖြစ်ပွားမှုလျော့ကျစေပါတယ်။
၁၁. တင်ပါးဆုံတစ်ဝှိုက် ကြွက်သားတွေကို သန်စွမ်းစေပါတယ်။
၁၂. နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်မောကျစေပါတယ်။
အချစ်ကြောင့်ပဲဖြစ်စေ အိမ်ထောင်ရေးကြောင့်ပဲဖြစ်စေ စိတ်တူသဘောတူ ဆက်ဆံကြဖို့သာ အရေးကြီးပါတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ကြည်ဖြူတဲ့ ဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက်ရင်း ကျန်းမာသာယာ ကောင်းမွန်တဲ့ သဘာဝတရားကြီးကို ပိုင်ဆိုင်ရရှိနိုင်ကြပါစေ။